ပူပူနွေးနွေး မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Nova 3, Nova 3i နဲ့ မတ်လတုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Nova 3e တို့က ဘာတွေကွာခြားသွားလဲ – DigitalTimes.com.mm
ပူပူနွေးနွေး မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Nova 3, Nova 3i နဲ့ မတ်လတုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Nova 3e တို့က ဘာတွေကွာခြားသွားလဲ
ပထဦးဆုံး ဈေးနှုန်းတွေကို အရင်ဆုံး ပြောရပါလိမ့်မယ်။ RAM 6GB/ROM 128GB ပါဝင်တဲ့ Nova3က ၅၅၉,၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်ပြီး RAM 4GB/ROM 128GB ပါဝင်တဲ့ Nova 3i ကတော့ ၃၅၉,၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာပါ။ သူတို့ထက် အရင် မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ RAM 4GB/ROM 64GB မော်ဒယ် Nova 3e ကိုတော့ ၃၃၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Nova3ရဲ့ Display အပိုင်းအတွက် ၆.၃ လက်မ မျက်နှာပြင် အကျယ်ရှိ IPS LCD Display ကို အသုံးပြုထားပြီး Resolution ကတော့ 1080 x 2340 pixels ပါဝင်မှာပါ။ အလားတူ Nova 3i ကလည်း Nova3မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Display ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Nova 3e ကတော့ ၅.၈၄ လက်မ မျက်နှာပြင် အကျယ်ရှိ IPS LCD Display ကို အသုံးပြုထားပြီး Resolution ကတော့ 1080 x 2280 pixels ဘဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ Nova 3e က Nova3နဲ့ Nova 3i တို့ထက် Display Size ပိုသေးသွားမယ်၊ Display resolution နည်းနည်းလေး ပိုနည်းသွားမယ်ပေ့ါဗျာ။
Nova3မှာက P20 Pro မှာ သုံးထားတဲ့ Kirin 970 Chipset (Mali-G72 MP12 GPU) ကိုထည့်သွင်းပေးထားပြီး Nova 3i မှာတော့ Huawei ရဲ့ ပူပူနွေးနွေး Processor ဖြစ်တဲ့ Kirin 710 Chipset (Mali-G51 MP4 GPU) ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Nova 3e ကတော့ Kirin 659 Chipset (Mali-T830 MP2) ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီတော့ Nova 3e နဲ့ Nova 3i က ဈေးသိပ်မကွာတဲ့အတွက် Kirin 710 Chipset ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Nova 3i က ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ကင်မရာ အပိုင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် Nova3မှာ 24MP+16MP Camera တွေကို ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာတော့ 24MP+2MP Camera တွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Nova3မှာ စုစုပေါင်း ကင်မရာ ၄လုံး ပါဝင်ပြီး Megapixel ပမာဏတွေကလည်း အားရစရာပါဘဲ။ Nova 3i မှာတော့ 16MP+2MP Camera တွေကို ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်မှာတော့ 24MP+2MP Camera တွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ Nova3နဲ့ Nova 3i က Selfie Camera တွေတူညီပြီး နောက်ကျောဘက် ကင်မရာ အပိုင်းမှာတော့ ဈေးပိုများတဲ့ Nova3ကဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ Nova 3e မှာတော့ နောက်ကျောဘက်အတွက် 16MP+2MP Camera နဲ့ ရှေ့မျက်နှာပြင်အတွက် 16MP Camera တွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ Nova 3i နဲ့ Nova 3e ရဲ့ နောက်ကျောဘက် ကင်မရာ တပ်ဆင်ထားပုံက တူညီပြီး Selfie Camera အပိုင်းမှာတော့ Nova 3i က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ (Megapixel ပမာဏ အရပေါ့).
Battery & USB & Weight
Nova3မှာ 3750mAh ဘက်ထရီ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး 18W Fast Charge Support ရရှိမှာပါ။ Nova 3i မှာတော့ 3340mAh ဘက်ထရီ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး 10W Fast Charge Support ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ P20 Lite ခေါ် Nova 3e ကတော့ 3000mAh ဘဲ ပါဝင်ပြီး 9V/2A Fast Charge Support ရရှိပါလိမ့်မယ်။ Nova3နဲ့ Nova 3e တို့မှာ USB Type-C ကို အသုံးပြုထားပြီး Nova 3i မှာတော့ သာမန် microUSB ကိုသာ အသုံးပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလေးချိန်အားဖြင့် Nova3က 166grams, Nova 3i က 169grams နဲ့ Nova 3e ကတော့ 145grams သာ ရှိပါတယ်။
နိဂုန်းချူပ်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Nova 3i က microUSB သုံးထားတာကလွဲပြီး ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ Nova 3e ထက်သာပါတယ်။ ဒီတော့ Nova 3e ကိုဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေသူများအတွက် Nova 3e အစား Nova 3i ကိုဝယ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ပူပူနှေးနှေး မိတျဆကျထားတဲ့ Nova 3, Nova 3i နဲ့ မတျလတုနျးက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ Nova 3e တို့က ဘာတှကှောခွားသှားလဲ
ပထဦးဆုံး စြေးနှုနျးတှကေို အရငျဆုံး ပွောရပါလိမျ့မယျ။ RAM 6GB/ROM 128GB ပါဝငျတဲ့ Nova3က ၅၅၉,၀၀၀ ကပျြ ကသြငျ့ပွီး RAM 4GB/ROM 128GB ပါဝငျတဲ့ Nova 3i ကတော့ ၃၅၉,၀၀၀ ကပျြ ကသြငျ့မှာပါ။ သူတို့ထကျ အရငျ မွနျမာနိုငျငံ စြေးကှကျထဲကို ဝငျရောကျခဲ့တဲ့ RAM 4GB/ROM 64GB မျောဒယျ Nova 3e ကိုတော့ ၃၃၉,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခနြတေယျလို့ သိရပါတယျ။
Nova3ရဲ့ Display အပိုငျးအတှကျ ၆.၃ လကျမ မကျြနှာပွငျ အကယျြရှိ IPS LCD Display ကို အသုံးပွုထားပွီး Resolution ကတော့ 1080 x 2340 pixels ပါဝငျမှာပါ။ အလားတူ Nova 3i ကလညျး Nova3မှာ အသုံးပွုထားတဲ့ Display ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ Nova 3e ကတော့ ၅.၈၄ လကျမ မကျြနှာပွငျ အကယျြရှိ IPS LCD Display ကို အသုံးပွုထားပွီး Resolution ကတော့ 1080 x 2280 pixels ဘဲ ရှိပါတယျ။ ဒီတော့ Nova 3e က Nova3နဲ့ Nova 3i တို့ထကျ Display Size ပိုသေးသှားမယျ၊ Display resolution နညျးနညျးလေး ပိုနညျးသှားမယျပေ့ါဗြာ။
Nova3မှာက P20 Pro မှာ သုံးထားတဲ့ Kirin 970 Chipset (Mali-G72 MP12 GPU) ကိုထညျ့သှငျးပေးထားပွီး Nova 3i မှာတော့ Huawei ရဲ့ ပူပူနှေးနှေး Processor ဖွဈတဲ့ Kirin 710 Chipset (Mali-G51 MP4 GPU) ကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ Nova 3e ကတော့ Kirin 659 Chipset (Mali-T830 MP2) ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ဒီတော့ Nova 3e နဲ့ Nova 3i က စြေးသိပျမကှာတဲ့အတှကျ Kirin 710 Chipset ကို အသုံးပွုထားတဲ့ Nova 3i က ရှေးခယျြစရာ ဖွဈလာပါတယျ။
ကငျမရာ အပိုငျးကို ပွောရမယျဆိုရငျ Nova3မှာ 24MP+16MP Camera တှကေို ကြောဘကျမှာ တပျဆငျထားပွီး ရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျမှာတော့ 24MP+2MP Camera တှကေို တပျဆငျထားပါတယျ။ Nova3မှာ စုစုပေါငျး ကငျမရာ ၄လုံး ပါဝငျပွီး Megapixel ပမာဏတှကေလညျး အားရစရာပါဘဲ။ Nova 3i မှာတော့ 16MP+2MP Camera တှကေို ကြောဘကျမှာ တပျဆငျထားပွီး ရှဘေ့ကျမကျြနှာပွငျမှာတော့ 24MP+2MP Camera တှကေို တပျဆငျထားပါတယျ။ ဒီတော့ Nova3နဲ့ Nova 3i က Selfie Camera တှတေူညီပွီး နောကျကြောဘကျ ကငျမရာ အပိုငျးမှာတော့ စြေးပိုမြားတဲ့ Nova3ကဘဲ ပိုမိုကောငျးမှနျပါလိမျ့မယျ။ Nova 3e မှာတော့ နောကျကြောဘကျအတှကျ 16MP+2MP Camera နဲ့ ရှမေ့ကျြနှာပွငျအတှကျ 16MP Camera တှကေို တပျဆငျထားပါတယျ။ ဒီတော့ Nova 3i နဲ့ Nova 3e ရဲ့ နောကျကြောဘကျ ကငျမရာ တပျဆငျထားပုံက တူညီပွီး Selfie Camera အပိုငျးမှာတော့ Nova 3i က အပွတျအသတျ အနိုငျရပါလိမျ့မယျ။ (Megapixel ပမာဏ အရပေါ့).
Nova3မှာ 3750mAh ဘကျထရီ ထညျ့သှငျးပေးထားပွီး 18W Fast Charge Support ရရှိမှာပါ။ Nova 3i မှာတော့ 3340mAh ဘကျထရီ ထညျ့သှငျးပေးထားပွီး 10W Fast Charge Support ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။ P20 Lite ချေါ Nova 3e ကတော့ 3000mAh ဘဲ ပါဝငျပွီး 9V/2A Fast Charge Support ရရှိပါလိမျ့မယျ။ Nova3နဲ့ Nova 3e တို့မှာ USB Type-C ကို အသုံးပွုထားပွီး Nova 3i မှာတော့ သာမနျ microUSB ကိုသာ အသုံးပွုထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ အလေးခြိနျအားဖွငျ့ Nova3က 166grams, Nova 3i က 169grams နဲ့ Nova 3e ကတော့ 145grams သာ ရှိပါတယျ။
နိဂုနျးခြူပျအနနေဲ့ ပွောရမယျဆိုရငျ Nova 3i က microUSB သုံးထားတာကလှဲပွီး ကနျြတဲ့အပိုငျးတှမှော Nova 3e ထကျသာပါတယျ။ ဒီတော့ Nova 3e ကိုဝယျဖို့ စဥျးစားနသေူမြားအတှကျ Nova 3e အစား Nova 3i ကိုဝယျဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။
HuaweiHuawei Nova 3Huawei Nova 3eHuawei Nova 3i
Xiaomi က 128GB Mi 8 SE ကို ရောင်းချ
iPhone X ကို ကြော်ညာ ဗီဒီယိုသုံးခုဖြင့် ထပ်နှိပ်ကွပ်လိုက်ပြန်တဲ့ Samsung